Kusarudza Nokuchenjera Uchiri Muduku | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
‘Imi majaya nemiwo mhandara, rumbidzai zita raJehovha.’—PIS. 148:12, 13.
Vechiduku vangaitei iye zvino zvinozoita kuti vave nemikana yakanaka mubasa raJehovha?
Vamwe vechiduku vakashandisa sei nguva yavo kushumira Jehovha?
Mazano api eBhaibheri angakubatsira kusarudza zvakanaka chaizvo muupenyu?
1. VaKristu vechiduku vakawanda vari kunakidzwa nokuitei?
TIRI kurarama munguva inokosha chaizvo. Hakuna kumbobvira kwava nevanhu vakawanda vari kuuya kuzonamata Jehovha sezvavari kuita mazuva ano. (Zvak. 7:9, 10) Vechiduku vakawanda vari kunakidzwa nezvavari kusangana nazvo pakubatsira vanhu kunzwisisa chokwadi cheBhaibheri chinoponesa upenyu. (Zvak. 22:17) Vamwe vechiduku vari kudzidzisa vanhu Bhaibheri, vachivabatsira kuti vave noupenyu hwakanaka. Vamwe vari kushanda nesimba kudzidza mimwe mitauro kuti vaparidze mashoko akanaka mumitauro iyoyo. (Pis. 110:3; Isa. 52:7) Chii chaungaita kuti uitewo zvizere basa iri rinonakidza?
2. Muenzaniso waTimoti unoratidza sei kuti Jehovha anoda kupa vechiduku mabasa? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
2 Uchiri muduku, unogona kuita zvisarudzo zvingazokubatsira kuwana mikana yokunakidzwa mubasa raMwari. Somuenzaniso, Timoti wokuRistra akaita zvisarudzo zvakanaka izvo zvakazoita kuti apiwe basa roumishinari zvimwe ava kuda kusvitsa kana kuti achangoti pfuurei makore 20. (Mab. 16:1-3) Zvinoita sokuti pashure pemwedzi mishomanana Timoti ava mumishinari, Pauro akamutuma kuungano yeTesaronika yainge ichangotangwa kuti anosimbisa hama. Pauro ainge abva kuTesaronika nemhaka yokutambudzwa zvakanyanya kwaiitwa vaKristu. (Mab. 17:5-15; 1 VaT. 3:1, 2, 6) Unofunga kuti Timoti anofanira kunge akanzwa sei paakapiwa basa iri?
CHISARUDZO CHINONYANYA KUKOSHA
3. Chisarudzo chipi chinonyanya kukosha chaungaita muupenyu, uye ungachiita riini?
3 Paunenge uchiri muduku ndipo paunofanira kuita zvisarudzo zvinokosha. Asi chisarudzo chinopfuura zvose ndechokushumira Jehovha. Ndeipi nguva yakanyanya kunaka yokuita chisarudzo ichi? Jehovha anoti: “Yeukawo Musiki wako Mukuru mumazuva oujaya hwako.” (Mup. 12:1) Nzira yakanaka chete ‘yokuyeuka’ Jehovha ndeyokumushumira nemwoyo wose. (Dheut. 10:12) Chisarudzo chako chokushumira Mwari nemwoyo wose ndicho chinonyanya kukosha kupfuura zvose zvaungaita. Zvimwe zvose zvauchasarudza muupenyu zvine chokuita nechisarudzo ichocho.—Pis. 71:5.
4. Ndezvipi zvimwe zvisarudzo zvichakubatsira kana kukukanganisa pakushumira Mwari?
4 Ichokwadi kuti chisarudzo chako chokushumira Jehovha handicho choga chine chokuita neramangwana rako. Somuenzaniso, ungadawo kusarudza kuti uchazoroora kana kuroorwa here, kuti ndiani waungaroorana naye uye kuti uchazowana sei chokurarama nacho. Zvisarudzo izvi zvinokosha, asi zvakanaka kutanga wasarudza kushumira Jehovha nemwoyo wose. (Dheut. 30:19, 20) Nei? Nokuti zvisarudzo zvacho zvose zvinodyidzana. Zvauchasarudza panyaya yewanano uye basa zvinogona kukubatsira kana kuti kukukanganisa pakushumira Mwari. (Enzanisa naRuka 14:16-20.) Uyewo, kuda kwaunoita kushumira Mwari kuchakubatsira kusarudza panyaya yewanano uye yebasa. Saka tanga kusarudza zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe.—VaF. 1:10.
UCHAITEI UCHIRI MUDUKU?
5, 6. Taura muenzaniso unoratidza kuti kuita zvisarudzo zvakanaka kunogona kuita kuti uzova nemikana yakanaka yokushumira Mwari. (Onawo nyaya inoti “Zvandakasarudza Ndichiri Muduku” iri mumagazini ino.)
5 Kana wasarudza kushumira Mwari, unogona kufungisisa zvaanoda kuti uite uye kusarudza kuti uchamushumira sei. Imwe hama yokuJapan yakanyora kuti: “Pandaiva nemakore 14, ndakaenda kunoparidza nemumwe mukuru weungano uyo akaona kuti ndakanga ndisinganakidzwi noushumiri. Akandiudza zvinyoro-nyoro kuti: ‘Yuichiro enda kumba. Kana wasvika gara pasi wonyatsofunga zvawakaitirwa naJehovha.’ Ndakaita zvaakataura. Ndakatopedza mazuva ndichifungisisa uye ndichinyengetera. Zvishoma nezvishoma, ndakachinja mafungiro angu. Pasina nguva ndakanga ndava kunakidzwa nokushumira Jehovha. Ndainakidzwa nokuverenga nezvemamishinari uye ndakatanga kufunga nezvekuita zvakawanda pakushumira Mwari.”
6 Yuichiro anowedzera kuti: “Ndakatanga kuita zvisarudzo zvaizoita kuti ndikwanise kushumira Jehovha ndiri kumhiri kwemakungwa. Somuenzaniso, ndakasarudza kudzidza mutauro weChirungu. Pandakapedza chikoro, ndakasarudza kupota ndichiita basa rokudzidzisa Chirungu kuitira kuti ndikwanise kupayona. Pandainge ndava nemakore 20, ndakatanga kudzidza mutauro wechiMongolian uye ndakawana mukana wokushanyira boka revaparidzi vechiMongolian. Papera makore maviri muna 2007 ndakashanya kuMongolia. Pandakaenda kunoparidza nemamwe mapiyona ndokuona kuti vanhu vakawanda vaitsvaka chokwadi, ndakafunga zvokutamira ikoko kuti ndinobatsira. Ndakadzokera kuJapan kuti ndinogadzirira zvokutama. Ndave ndichipayona kuMongolia kubva muna April 2008. Kuno upenyu hausi nyore. Asi vanhu vari kuteerera mashoko akanaka uye ndinokwanisa kuvabatsira kuti vaswedere pedyo naJehovha. Ndinofunga kuti ndakaita chisarudzo chakanaka chaizvo muupenyu.”
7. Mumwe nomumwe anofanira kuzvisarudzirei, uye muenzaniso upi watakasiyirwa naMosesi?
7 Mumwe nomumwe anofanira kuzvisarudzira kuti achaita sei muupenyu hwake seChapupu chaJehovha. (Josh. 24:15) Hatingakusarudziri kuti woroora kana kuroorwa here uye kuti woroorana nani. Uyewo hatingakusarudziri basa raunofanira kuita. Uchasarudza basa risingadi kudzidzirwa kwenguva yakareba here? Vamwe venyu imi vaKristu vechiduku munogara kumamisha kune urombo asi vamwe munogara mumaguta akabudirira. Makasiyana chaizvo paunhu, unyanzvi, ruzivo, zvamunofarira uye zvinangwa zvenyu pakunamata. Zvichida kusiyana kwamakaita kwakangofanana nekusiyana kwainge kwakaita Mosesi nevamwe vechiduku vechiHebheru vaiva muIjipiti. Mosesi paaiva muduku aiva nemikana yose yaiwanikwa nevanhu veimba youmambo asi vamwe vaHebheru vaiva varanda. (Eks. 1:13, 14; Mab. 7:21, 22) Vairarama munguva dzinokosha chaizvo sezvauri kungoitawo. (Eks. 19:4-6) Asi mumwe nomumwe aifanira kusarudza kuti oitei muupenyu hwake. Mosesi akaita chisarudzo chakanaka.—Verenga VaHebheru 11:24-27.
8. Chii chingabatsira vechiduku vari kufunga kuita zvisarudzo muupenyu?
8 Jehovha anokubatsira kuita zvisarudzo zvakanaka uchiri muduku. Anokupa mazano anokubatsira kuita zvisarudzo muupenyu hwako. (Pis. 32:8) Uyewo, vabereki vako vechiKristu nevakuru veungano vanogona kukubatsira kuti ungashandisa sei mazano aya. (Zvir. 1:8, 9) Ngatikurukurei mazano matatu eBhaibheri anogona kukubatsira kuita zvisarudzo zvakanaka zvichakubatsira muupenyu hwako.
MAZANO MATATU EBHAIBHERI ANGAKUTUNGAMIRIRA
9. (a) Jehovha anotiremekedza sei norusununguko rwokusarudza? (b) Kutanga “kutsvaka umambo” kunoita kuti pave nemikana ipi?
9 Tanga kutsvaka Umambo hwaMwari nokururama kwake. (Verenga Mateu 6:19-21, 24-26, 31-34.) Jehovha anotiremekedza nokutipa rusununguko rwokusarudza zvatinoda. Haakuudzi kuti unofanira kupedza nguva yakareba sei uchiparidza Umambo uchiri muduku. Asi Jesu akapa zano rinobatsira rokutanga kutsvaka Umambo. Mashandisiro aunoita zano iroro achakupa mikana yokuratidza kuti unoda Mwari nevavakidzani vako uye kuti unoonga tariro youpenyu husingaperi. Paunenge uchifungisisa nyaya yewanano uye basa, funga kuti zvisarudzo zvako hazvizoiti here kuti uzvidye mwoyo nezvokurarama nazvo kana kuti zvicharatidza kuti unoshingairira Umambo hwaMwari nokururama kwake zvakadii.
10. Chii chakaita kuti Jesu afare, uye zvisarudzo zvipi zvichaita kuti ufare?
10 Wana mufaro nokushumira vamwe. (Verenga Mabasa 20:20, 21, 24, 35.) Jesu akatidzidzisa chokwadi ichi chinokosha muupenyu. Aiva munhu aifara chaizvo nokuti aiita kuda kwaBaba vake kwete kwake. Jesu aifara paaiona vanhu vachiteerera mashoko akanaka. (Ruka 10:21; Joh. 4:34) Zvichida wakatombowana mufaro unobva pakubatsira vamwe. Kana ukaita zvisarudzo zvako uchishandisa mazano akataurwa naJesu, uchafara uye Jehovha achafarawo.—Zvir. 27:11.
11. Nei Bharuki akanga asisafari, uye izano ripi raakapiwa naJehovha?
11 Mufaro wedu mukuru unobva pakushumira Jehovha. (Zvir. 16:20) Zvinoita sokuti munyori waJeremiya, Bharuki, akambokanganwa pfungwa iyi. Pane imwe nguva, akanga asingachanakidzwi nebasa raJehovha. Jehovha akamuudza kuti: “Unoramba uchizvitsvakira zvinhu zvikuru. Usaramba uchitsvaka. Nokuti tarira ndichaunza dambudziko panyama yose, . . . uye ndichakupa mweya wako sechinhu chakapambwa munzvimbo dzose dzaungaenda.” (Jer. 45:3, 5) Unofungei? Chii chaizoita kuti Bharuki afare? Aizofara nokuzvitsvakira zvinhu zvikuru here kana kuti nokupukunyuka semushumiri waMwari akatendeka paizoparadzwa Jerusarema?—Jak. 1:12.
12. Chisarudzo chipi chakaita kuti Ramiro awane mufaro muupenyu?
12 Imwe hama inonzi Ramiro yakawana mufaro pakushumira vamwe. Yakati: “Ndinobva mumhuri yevarombo inogara mune mumwe musha uri mumakomo eAndes. Saka mukoma wangu paakati aida kundibhadharira mari yokuenda kuyunivhesiti, ndainge ndawana mukana wakakura chaizvo. Asi ndainge ndichangobva kubhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha uye ndakumbirwa nemumwe piyona kuti tinoparidza tose mune rimwe taundi duku. Ndakaendako, ndikadzidzira kugera musoro uye ndakavhura bhabhashopu kuti ndiwane chokurarama nacho. Pataiudza vanhu kuti tinoda kudzidza navo Magwaro, vakawanda vaigamuchira nomufaro. Ndakazotanga kupinda neungano yainge ichangotangwa yemutauro unotaurwa nevanhu veko. Iye zvino ndava nemakore gumi ndiri mushumiri wenguva yakazara. Hakuna rimwe basa ringaita kuti ndifare sezvandiri kuita ndichibatsira vanhu kudzidza mashoko akanaka mururimi rwaamai.”
Ramiro ave achinakidzwa chaizvo kushumira Jehovha kubvira achiri muduku (Ona ndima 12)
13. Nei zvakanyanya kunaka kushumira Jehovha uchiri muduku?
13 Nakidzwa nokushumira Jehovha uchiri muduku. (Verenga Muparidzi 12:1.) Haufaniri kufunga kuti unofanira kutanga wawana basa rakanaka kuti uzokwanisa kushumira Jehovha. Zvakanyanya kunaka kuti utange kushumira Jehovha zvizere uchiri muduku. Vechiduku vakawanda havana basa rakakura rokutarisira mhuri uye vachine utano uye vachine simba zvokuti vanokwanisa kuita mabasa akaoma. Chii chaunoda kuitira Jehovha uchiri muduku? Zvimwe unoda kuzopayona. Kana kuti unoda kuparidzira vanhu vanotaura mutauro wokune imwe nyika. Kana kuti une dzimwe nzira dzauri kufunga nadzo kushumira Jehovha zvizere uri muungano yako. Pasinei nokuti une chinangwa chipi, uchada basa rokuti uwane chokurarama nacho. Uchasarudza basa rakaita sei uye ucharidzidzira kwenguva yakareba sei?
KUSHANDISA MAZANO EBHAIBHERI KUITA ZVISARUDZO ZVAKANAKA
14. Munhu paanenge achironga ramangwana rake anofanira kungwarirei?
14 Mazano matatu eBhaibheri atakurukura anogona kukubatsira pakusarudza basa raunoda kuzoita. Vanachipangamazano vokuchikoro kwako vangaziva kuti mabasa api anowanikwa munzvimbo menyu. Kana kuti pangava nesangano rehurumende rinogona kukuudza basa rinowanika munharaunda yenyu kana kuti kwauchada kunoshumira uri. Mashoko anobva kuvanhu venyika anogona kubatsira, asi unangwarira. Vanhu vasingadi Jehovha vangaedza kuti ude zvinhu zviri munyika. (1 Joh. 2:15-17) Paunoona zvinhu zviri munyika, mwoyo wako unogona kukunyengera nyore nyore.—Verenga Zvirevo 14:15; Jer. 17:9.
15, 16. Ndiani angakutungamirira zvakanaka panyaya yokusarudza basa?
15 Kana wangoziva mabasa aunogona kuita, unenge wava kuda zano rinobatsira pakusarudza. (Zvir. 1:5) Ndiani angakubatsira kuongorora mabasa iwayo uchishandisa mazano eBhaibheri. Teerera vanhu vanoda Jehovha, vanokuda, vanonyatsokuziva uye vanonyatsoziva mamiriro ako ezvinhu. Vachakubatsira kuti uongorore zvaunokwanisa uye vavariro yako. Pamwe zvavachataura zvichakubatsira kuti uongorore zvakare zvinangwa zvako. Chokwadi une chikomborero chakakura kana vabereki vako vachida Jehovha! Uyewo vakuru vemuungano yako vanonyatsokwanisa kukutungamirira. Taurawo nemapiyona uye vatariri vanofambira. Vabvunze kuti nei vakasarudza kuita basa renguva yakazara? Vakatanga sei kupayona uye vanozviriritira sei? Makomborero api avakawana?—Zvir. 15:22.
16 Vaya vanonyatsokuziva vanogona kukupa mazano ane uchenjeri. Somuenzaniso, ngatitii uri kuda kusiyira chikoro chesekondari panzira kuti utange kupayona asi chikonzero chaicho chiri chokuti haudi kushanda nesimba kuchikoro. Munhu anokuda angaziva chiri kuita kuti ude kusiya chikoro. Saka angakubatsira kuona kuti kushingirira kuchikoro kuchakubatsira kuti usakurumidza kungorega zvinhu nokuti zvaoma. Kushingirira uku ndiko kunodiwa kana uchida kushumira Jehovha nemwoyo wose.—Pis. 141:5; Zvir. 6:6-10.
17. Tinofanira kudzivisa kuita zvisarudzo zvakaita sei?
17 Munhu wose anoshumira Jehovha achasangana nezvinhu zvinogona kumunetesa pakunamata zvomubvisa pana Jehovha. (1 VaK. 15:33; VaK. 2:8) Asi mamwe mabasa angaita kuti kunamata kwomunhu kuve pangozi zvakanyanya kupfuura mamwe. Vamwe vekwaunogara vakaita kuti ‘kutenda kwavo kuparare sengarava yaparara’ here pashure pokunge vasarudza rimwe basa? (1 Tim. 1:19) Zvinokosha kuti usaita zvisarudzo zvingazokanganisa ushamwari hwako naMwari.—Zvir. 22:3.
NAKIDZWA NOKUVA MUKRISTU WECHIDUKU
18, 19. Kana munhu achinzwa sokuti haasati ava kuda kushumira Jehovha anofanira kuitei?
18 Kana uine chido chokushumira Jehovha, shandisa mikana yaunayo uchiri mushumiri waMwari wechiduku. Ita zvisarudzo zvichaita kuti unakidzwe nokushumira Jehovha munguva ino inokosha.—Pis. 148:12, 13.
19 Asi ungaitei kana uchinzwa sokuti hausati wava kuda kushumira Jehovha? Ramba uchisimbisa kutenda kwako. Pashure pokunge muapostora Pauro ataura zvaaiedza kuita kuti akomborerwe naMwari, akanyora kuti: “Kana muine mamwe mafungiro akasiyana neaya pane chimwe chinhu, Mwari achakuratidzai mafungiro ari pamusoro apa. Zvisinei, kusvikira patasvika tichienda mberi, ngatirambei tichifamba zvakanaka nomuitiro iwoyu.” (VaF. 3:15, 16) Ramba uchifunga nezverudo rwaMwari uye zano rake rakanaka. Hakuna mumwe munhu anogona kukubatsira kuita zvisarudzo zvakanaka uchiri muduku kupfuura Jehovha.